Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Deegaanka / Gobol iyo degmooyin / Värmlands län / Storfors
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 31 7 2020
Degmada Storfors wa degmada uu fiican caruurta lehna amaan, waxeey ku taala bariga gobolka Värmland, 7 maayl ee dhanka galbeedka ka jirta Örebro, 7 maaylna bariga Karlstad.
473 kiilomitir oo laba jibaaran
Örebro 74 kiilomitir
Västerås 169 kiilomitir
Storfors waxeey lee dehay dad dhaafaayo 4 100 oo qof halkaasi ee ku dhawaad hafkod ee dagan yihiin xaafadaha dhisan inta kalena dagan yihiin baadiyaha Bjurtjärn iyo Lungsund. Halkaan waxaa ku yaalo biyo-mareenka Bergslag oo ah nidaam-biyeed oo weeyn iskuna xiran, jidad-socodeed oo uu haboon weeyn iyo yarba iyo ururo badan. Storfors bartamaheed waxaa ku yaalo dukaamo, banki, rug caafimaad, guriga dhaqanka iyo goob-isboorti.
Stiftelsen Björkåsen waa shirkad guri hab samafal ku dhisan oo degmada lee dahay, waxeeyna kireeysaa guriyaal.
Storfors waxaa ku matalan dad badan oo luuqado kala duwan ku hadlo. Waxaa ka mid ah oo taasi keenay in gobolka sanadooyin badan lahaay qabilaad-qaxooti laakin waxaa keenay oo kale in gobolka uu yahay mid dabiicad-qurxoon oo dad badan sidaas darteed halkaan uu imaadeen.
Kooxo-luqadeedka ugu weeyn waxaa ka mid ah af carabi, af soomaali, afka iraan, afka isbaaniya, afka hooland, afka burma, afka thayland iyo afka finland.
Storfors waxaa ku yaalo ururo badan oo loogu talo galay caruur, dhalinyaro iyo dad waa weeyn. Waxaa jiro ururo oo ka hoowl galo isboortiga, howlaha dibada, dhaqanka, siyaasada iyo diinta.
Halkaan waxaa ku guriga degmada oo leh xafiiska shaqada iyo xarun boolis, guriga dhaqanka oo leh maktabad, biibito, shaleemo iyo goobta hoowlaha dhaqameed. Bartamaha waxaa ku yaalo banki, goobaha timo jarka, dukaan gacan labaad gado, dukaamo gado miiqa dunta daabaco, sheyga wax lagu talo, cuntada xayawaanka iyo badeecada guriga. Rugta caafimaadka iyo farmashiyaha waxeey ku yaaliin Hälsans hus. Sido kale Storefors waxaa ku yaalo dukaan gado ubax, boosteejada beensiinka iyo dhowr biibito iyo goobo cunto.
Qasnada ceeymiska iyo Hey'adda canshuraha waxeey ku yaalin Kristinehamn ayagoo jiro 30 kilomitir.Qasnada ceeymiska iyo Hey'adda canshuraha waxeey ku yaalin Kristinehamn ayagoo jiro 30 kilomitir.
Degmada qaybteeda is dhegalka bulshada waxay ku taalaa xarunta degmada.
Storefors waxaa ku yaalo sadax dugsiyaal xanaano, gudaha Bjurtjärn waxaa ku taalo labo dugsiyaal xanaano. Fasalka eberaadka iyo guriga xiliiga firaaqada waxeey ku yaaliin iskuulka Kroppa iyo iskuulka Bjurtjärns.
Waxaa jiro sadax dugsiyaal hoose oo ku yaalo degmada Storfors. Iskuulka Vargsbro waa iskuulka ugu weeyn asagoo leh arday dhigato fasalada 4-9. Iskuulka Kroppa waxaa dhigato arday ilaa heerka fasalka 3aad, iskuulka Bjurtjäns ilaa heerka fasalka 6aad.
Halka waxbarasho ee heerka dugsiga sare ah oo ku taalo degmada waa barnaamijka-bilaabadka oo ula jeedadiisa tahay in laga helo shahaado lagu galo barnaamijyada qaranka ee dugsi sare ama in ardayga waxbarasho loo siiyo si uu unoqdo mid la shaqeeysan karo. Barnaajimyada kale ee dugsiga sare waxeey ku yaaliin degmooyinka hareero.
Waxbarashada dadka waa weeyn iyo waxbarashada iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga waxaa lagu dhigaa goobaha guriga-dhaqanka. Waxaan soo bandhignaa koorsoyaal ah heer asaasi iyo heer dugsi sare, waxbarashad-iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga (sfi), waxbarasho gaar ah oo loogu tala galay dadka waa weeyn (särvux). Sido kale waxaa jiro karto fursad lagu dhigto waxbarasho lagu gaaraayo in loo helo haboonaanshaha gaarka ee loogu tala galay waxbarashada jaamcadeed.
Hälsans Hus waxaa ku taalo rug caafimaad oo leh kalkaaliyaal caafimaad iyo dhakhaatiro, farmashiye, rugta caafimaadka caruurta, daryeel ilko iyo jimcsiga bukaanka.
Ayadoo ee jiirto baahi oo khuseeyso in aan labadeenuba is wada fahamno waxaan kashaneeynaa turjumaan markii loo baahdo. Waxeey ku saabsanaa kartaa xariir iskuuleed, hey'add ama daryeelka bukaanka. Xariirka-turjumaanada badankood waxuu noqdaa mid khadka telefoonka ku jiro, turjumaana waxaa la qabtaa markii loo baahdo.
Laga bilaabaa boosteejada tareenka iyo boosteejada baska Storfors waxaa ka baxo basas iyo tareen uu socdo meelaha dhow. Xilliyada baska waxeey ku jiraan bogga Värmlandstrafik.
Storfors waxaa ku taalo shirkado yar iyo ku dhexdhexaad uu yahay weeyninkooda.
Shaqooyinka ka banaan gudaha Storfors